Dani Alves oo Albaabada u furay inuu u dhaqaaqo horyaalka Premier League – Gool FM
Haaruun June 26, 2019
(Paris) 26 Juunyo 2019. Dani Alves ayaa la soo warinayaa inuu irdaha u furay inuu u dhaqaaqo horyaalka Waddanka Ingiriiska ee Premier League.
Difaacan ka tagaya kooxda Paris Saint-Germain ee Dani Alves ayaa xaqiijiyey inuu jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro horyaalka Premier League.
Warsidaha Globe Sports ayaa warinaya in dambeedka garabka midig ee PSG, Dani Alves uu shaaciyey inuu aad u jecelaan lahaa inuu ka ciyaaro dalka Ingiriiska kaddib markii uu xaqiijiyey inuu ka tagayo kooxda xafidanaysa horyaalka Ligue 1 ee Waddanka Faransiiska.
36-sano jirkaan kaasoo xulkiisa qaranka Brazil haatan kala qeyb galaya Copa America ayaa ka tagaya caafimadda Faransiiska kaddib labo xilli ciyaareed oo uu ku qaatay halkaas.
Alves waxa uu ka soo ciyaaray illaa iyo haatan saddex horyaal oo ka mid ah kuwa ugu waa weyn qaaradda Yurub oo kala ah Spain – La Liga, Italy – Serie A iyo France – Ligue 1.
Haddana waxa uu doonayaa inuu u dhaqaaqo horyaalka xiisaha leh ee Ingiriiska, kaasoo haddii uu ku biiro u noqonaya horyaalkiisii afaraad ee ka mid ah shanta horyaal ee ugu waa weyn qaaradda Yurub oo uu Alves ka ciyaaray.
Difaacii hore ee kooxaha Barcelona iyo Juventus ayaa hadda la warinayaa inuu alabaabada u furay inuu u dhaqaaqo horyaalka Premier League xagaagan, inkastoo aan weli la sheegin kooxda uu ku biiri doono.
Nigeria oo noqday xulkii ugu horreeyey ee iska xaadiriya Wareegga 16-ka Koobka qarammada qaaradda Afrika… + SAWIRRO